जय आमा, जय मातातीर्थ ! — Breaking News, Headlines & Multimedia
राधा लुइँटेलबैशाख २८, २०७८काठमाडौं
सानै छँदा रेडियोमा आज आमाको मुख हेर्ने दिन भन्ने सुनेपछि मैले उहाँलाई आँ… गर्न लगाएकी थिएँ । किशोरावस्था पार गरेलगत्तै जब मैले जन्मघर छोडेर कर्मघर लागेँ, त्यसपछि प्रत्येक वैशाख कृष्ण औँशी नजिकिँदै जाँदा बाल्यकालसँगै आमासँग बिताएका ती स्वर्णीम यादहरू मानसपटलमा घुम्न थाल्छन् । यो वर्ष मातातीर्थ औँशी वैशाख २८ गते परेको छ । हो यही पर्वका पूर्वसन्ध्यामा मेरो मस्तिष्कमा जेलिएका बाल्यकालका संस्मरणलाई यसरी शब्दमा उतार्दैछु ।
आमा सदैव सबैका लागि स्वर्ग अनि भगवान् हुन । आमाका साथ रहने जोकोही भाग्यशाली ठहर्नु स्वाभाविक छ । यद्यपि बिहेवारी गरेर जन्मघरबाट टाढिएका अनि मजदुरीका क्रममा घर छोडेर हिँडेका जोकोहीका लागि भने मातातीर्थ औँशी आमासँग भेट गर्ने गहकिलो माध्यम हुनसक्छ । त्यसैले जय आमा ! जय मातातीर्थ ! रातोपाटीबाट